Ku saabsan adiga | Aasaaska Abaalmarinta, Jacaylka, Jinsiga iyo Internetka
Bogga ugu weyn Adiga kugu saabsan
adiga kugu saabsan waxaa loogu talagalay in lagaa caawiyo sidii aad u heli lahayd ilo ku habboon baahiyahaaga sida isticmaale ahaan, waalid ahaan, weheliso, xirfadle ama haddii aad xiisaynayso. Waxay dhismihiisa socon doontaa toddobaadyada soo socda iyadoo lagu dari doono noocyo cusub.
Aasaaska Abaal-marinta waxaan si gaar ah diiradda u saareynaa waxyaabaha qaawan ee internetka. Waxaan eegnaa saamaynta ay ku leedahay caafimaadka maskaxda iyo jir ahaanba, cilaaqaadka, gaarista iyo dambi. Waxaan hiigsaneynaa inaan ka dhigno cilmibaarista taageeraysa inay u sahlanaato kuwa aan aheyn saynisyahannada si qof walba uu u sameeyo xulashooyin xog ogaal ah oo ku saabsan adeegsiga sawirrada internetka. Waxaan eegnaa faa'iidooyinka joojinta galmada iyadoo lagu saleynayo cilmibaarista iyo warbixinnada kuwa tijaabiyay joojinta. Waxaan bixinnaa hagis ku saabsan dhisida adkeysiga walwalka iyo qabatinka.
Hay'adda Abaalmarinta Abaal-marinta waxay ku salaysneyd shaqadeeda qeexitaanka hay'adda Caafimaadka Adduunka ee qeexitaanka caafimaadka galmada:
Goobteenna ma muujineyso wax sinaba ah.
Haddii aad jeceshahay inaad aragto annaga oo u samaynayna bog koox gaar ah, fadlan noo sheeg adoo adeegsanaya foomka xiriirka hoose.
Halkan waxaad ka xiriiri kartaa bogagga leh with
Kheyraadka loogu talagalay 12s